दोहामा राती जीवन, पुरुष र महिलाका लागि यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | संयुक्त अरब अमीरात, मार्गदर्शकहरू
कतार o कतार फारस खाडीमा एक धनी देश हो, तेल र ग्यासका लागि सबै धन्यवाद। यसको राजधानी दोहा हो र यद्यपि दुबईले विश्वभरका पर्यटकहरूलाई प्राप्त गर्ने प्रख्यात त्यस्तो छैन, त्यसैले हामी मुस्लिम शहरको रात्रि जीवनको बारेमा सोच्छौं र हामी यसमा गैर-मुस्लिम पश्चिमीहरूले के गर्न सक्दछौं।
भाग्यवस हामी एक व्यस्त र रमाईलो गर्न सक्दछौं दोहामा रातको जीवन, त्यसैले पूर्वानुमान वा डरको पासोमा नपर्नुहोस्। हामी कहाँ जान सक्छौं, हामी के गर्न सक्दछौं, कुन समयमा र कोसँग हामी हेरौं।
2 दोहामा रातको जीवन
सहर १ 1825 मा स्थापना भएको थियो र उसको नामको अर्थ अरबी हो ठूलो रूख। यो कतारी प्रायद्वीपको तटमा अवस्थित छ र २० औं शताब्दीको धेरै समयसम्म यसमा थोरै मानिसहरू बसोबास गर्थे, जसमध्ये धेरै जसो मोती माछा मार्नेहरू थिए। सहर सरल थियो तर तेल र ग्यासको शोषण बढ्न थालेपछि नयाँ धनले यसको रूप परिवर्तन गर्यो जबसम्म यो ठूलो र अधिक आधुनिक शहर भएन।
जुन र अगष्टको बीचमा भ्रमण गर्न उचित हुँदैन किनभने तातो धेरै नै छ, º० डिग्री सेन्टिग्रेड वा अधिकको तापक्रमको साथ। त्यहाँ धेरै आर्द्रता छ त्यसैले तापक्रमको ध्यान दिएर खत्तम पार्ने तापीय उत्तेजना हो। यो बिरलै वर्षा हुन्छ त्यसैले सबै तरिकाले हिउँदमा जानु राम्रो उपाय हो।
दोहामा रातको जीवन
दोहा कतारको राज्यको सबैभन्दा ठूलो सहर हो र आज यसमा धेरै होटेलहरू छन् र ती भित्र धेरै बारहरू सञ्चालन हुन्छ। त्यो रातलाई कार्य दिन्छ। हामीलाई याद गर्नुहोस् कि यो एक मुस्लिम देश हो र मुस्लिमसँग रक्सीको साथको सम्बन्ध छ। भन्नुको मतलब के हो भने केही होटल बाहेक यसको उपभोगको लागि अनुमति छ यद्यपि अवश्य पनि, पर्यटक हुनु नै केहि अर्कै कुरा हो।
त्यहाँ एक मात्र नाइटक्लब छ, पर्ल। यसमा दुई फ्लोरहरू, तीन बार र विशाल नृत्य फ्लोर छ। यहाँ युरोपेली बासिन्दाहरू र पर्यटकहरू जो भोजमा भेट्न मन पराउँछन् तर कहिले काँही एक पर्यटकको रूपमा यसलाई प्रवेश गर्न अलि कम खर्च लाग्छ तपाई एक सदस्य हुनु पर्छ। तसर्थ, कसैलाई भेट्न र उनीहरूलाई यो निम्त्याउन आमन्त्रित गर्नको लागि सोध्नुहोस्।
अन्यथा त्यहाँ पट्टीहरू छन् र हामीले माथि भनेजस्तै तपाईंले तिनीहरूलाई होटेलहरूमा भेट्टाउनुहुनेछ। उदाहरण को लागी, होटल रेड्जेसको टेरेसमा अस्सी लेजेन्ड्स स्पोर्ट्स बार छ रग्बी वा फुटबल जस्ता खेलकूद घटनाहरू हुँदा त्यहाँ भेटघाट हुन्छ। मा होटल रमाडो त्यहाँ अर्को स्पोर्ट्स-शैली पट्टी छ जुन प्राय: यसको स्टेज बिभिन्न ब्यान्डमा प्रदान गर्दछ, त्यसैले प्रत्यक्ष म्यूजिकहरू टेलिभिजन स्क्रिनमा थपिन्छ जब त्यहाँ हेर्नको लागि कुनै खेलहरू हुँदैन।
क्लाउड Nyn अल सद् Merweb होटल मा काम गर्दछ, धेरै धमिलो बत्तीहरूको साथ एक मिनी डिस्को, बिन्दुको लागि मधुरो छ कि प्रवेश द्वार मा तिनीहरूले तपाईं एक टॉर्च दिन्छ। Cool! दोहामा, अर्कोतर्फ, त्यहाँ एक शेराटन होटल पनि छ र पट्टी भित्र काम गर्दछ आयरिश हार्प, उत्तम संगीतका साथ पिन्टहरू र बियरको पिन्टहरू उत्तम ठाउँमा प्रत्यक्ष संगीतको साथ र धेरै धेरै यूरोपीयन भाइबसको साथ। A क्लासिक आयरिश पब तर कतारमा। तपाईं भित्र धुम्रपान गर्न सक्नुहुन्छ।
रिट्ज-कार्लटनमा त्यहाँ धेरै नै प्यारो पट्टी छ, मारीनामा भनिन्छ एडमिरलको। योसँग इनडोर स्पेस र अद्भुत दृश्यहरूको साथ बाहिरी ठाउँ छ। आइतवार केटीहरूको लागि हो, महिला दिन पूरा सप्ताहन्त अन्त्य गर्न बाध्य। बारले १० विभिन्न ककटेलहरू र सबै भन्दा राम्रो सेवा गर्दछ, प्रविष्ट गर्न तपाई कुनै पनि चीजको सदस्य हुनु आवश्यक पर्दैनकेवल राम्रो लुगा लगाउनुहोस् (वास्तवमा केटीहरूको रात आइतवारदेखि बुधवार सम्म चलेको छ)। समय बेलुका5देखि १२ बजे सम्मका हुन्छन्।
अविश्वसनीय र आधुनिक दृश्यहरूको सोच्दै हामी त्यसपछि टेरेसहरूमा बारहरू तिर धकेल्छौं, यो यस्तो शहर जहाँ यो सधैं तातो छ। राम्रो सोफा, आधुनिक संगीत, पानीको फोहरा, आधुनिक छाता, ती सबै। शुद्ध, हिल्टनमा। यहाँ बैठक पछि सुरू हुन्छ, राती 8 बजे, र यदि तपाईं एक महिला हुनुहुन्छ भने केटीको रात १०:०० मा समाप्त हुन्छ।
पश्चिम खाडीमा केम्पिंस्की छ र छैठौं तलामा बार जेड लाउन्ज। तपाई कुनै चीजको सदस्य बन्नु बिना नै प्रवेश गर्नुहुन्छ र फेरि, यदि तपाईं महिला हुनुहुन्छ भने सोमबारमा विशेष छुटको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।5देखि From बजे सम्म पेयहरू935 क्यूआर वरिपरि खर्च गर्छन् र रात २ बजे सम्म चल्दछ। मेरो विचारमा, संसारमा सब भन्दा ठाडो होटेल चेन मध्ये एक हो चेन डब्ल्यू। यहाँ दोहामा ती मध्ये एक छ र भित्र काम गर्दछ Wham
हालसालै यसलाई पूर्ण रूपमा रिसाइकल गरिएको छ, आधुनिक एरिसको साथ (हरियो पर्खाल, कालो फ्लोर, रंगीन सोफा), र सोमबार महिलाहरू पनि साँझ 9: after० पछि छुटको साथमा भाग्यमा छन्, यद्यपि यसले आफ्नो ढोका 30: 7० बजे खोल्दछ। अर्को प्रसिद्ध होटल चेन हो चार सीजन र नोबु यहाँ काम गर्दछ, एउटा टेरेस बार जोसका साथ दृश्यहरू र राती सुन्दर प्रकाशको साथ।
नोबुको खुशीको समय छ जुन दोहामा महिलाहरूको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय हो। यहाँ सोमबार राति6देखि 8 बिचको बीचका निवासीहरू देख्न सामान्य छ। यस पट्टीले विशेष मूल्यमा एक विशेष मेनू राख्दछ र यसको सेतो पियर र कालो पर्ल कोठाहरूमा प्रस्ताव गरिन्छ। टेबुल लिन चाँडो पुग्नु उत्तम हुन्छ किनभने तपाईसँग खाना छैन भने तपाईलाई अर्डर गर्न सक्नुहुन्न। रन! रात यहाँ बिहान १ बजे समाप्त हुन्छ।
मा मेलि डोहा त्यहाँ बार र पार्टी पनि छ। बारलाई Noir भनिन्छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय, व्यावसायिक र R&B संगीत सुन्न ठाउँ हो। मंगलबार, महिलाहरूले प्रवेश तिर्दैनन् र पुरुषहरू, यदि उनीहरू महिला ग्राहकको फाइदा लिन जान चाहन्छन् भने तिनीहरूले pm बजेपछि 50० क्यूआर तिर्नु पर्छ। सत्य यो हो कि Noir एक फिल्म बाट बाहिर जस्तो देखिन्छ, धेरै chic। को मिक्स बार यो पनि आधुनिक सुरुचिपूर्ण छ। यो वेस्टिन होटल मा काम गर्दछ।
यहाँ तपाईं हिप हप, आर एन्ड बी सुन्नुहुन्छ र मंगलबार तपाईं केटीहरूको रात दिउँसो5देखि बिहान २ बजेको बीचमा हुनुहुन्छ। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, रात लामो छ। O'clock बजे भन्दा पहिले आउन पनि सल्लाह दिइन्छ किनभने त्यसोभए तपाईंको फाइदा लिनको लागि खुशीको समय छ। नि: शुल्क प्रवेश तपाईलाई हिप हप वा डिस्को मनपर्दैन? त्यसोभए तपाईं जान सक्नुहुन्छ क्लब, सेन्ट रेगिस दोहामा: यहाँ मंगलबार रातमा क्युवाली तालको ब्यान्ड प्ले हुन्छ, जेरार्डो र हबानेरोस। बार होटलको चौथो फ्लोरमा छ र मध्य रात सम्म विशेष मूल्यहरू छन्।
के तपाईं छालाको सिट र गोल्डन लाइटको साथ सुपर बारमा बस्न चाहनुहुन्छ? त्यसपछि भ्रमण गर्नुहोस् सिगार लाउन्ज, शार्क गाउँ र स्पामा। के तपाईं लाइभ ज्याज सुन्न चाहनुहुन्छ? त्यसो हो ज्याज क्लब, ओरिक्स रोटाणामा। के तपाइँ डीजे चाहानुहुन्छ? त्यसपछि कंकालमा सार्नुहोस् हिल्टन होटल भित्र सोसायटी लाउन्ज। थप विवरणको साथ: मंगलबार केटीहरूको रात हो तर यो सस्तो पेयको बारेमा होईन तर मेकअपको बारेमा हो। हो, सम्पूर्ण रात मेनु र सस्तो पेय पदार्थहरूको अतिरिक्त त्यहाँ नि: शुल्क मेकअप र केश सत्रहरू छन्। महान! र अधिक, रात एमिरेट्स एयरलाइन्स द्वारा प्रायोजित हो त्यसैले केटीहरू त्यो कम्पनीमा भ्रमणको लागि भाग लिन्छन्। सुरक्षा पिन!
यी अन्य बारहरूको नोट लिनुहोस्: क्रिस्टल लाउन्ज, होटल डब्ल्यू मा, लाभा लाउन्ज, इंटरकन्टिनेन्टल दोहामा, ग्लो ककटेल बार, मारियट मार्क्विस, मा पर्ल लाउन्ज, मारियटमा, तरलता, क्राउन प्लाजा, Paloma इन्टरकन्टिनेन्टलमा।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » मार्गदर्शकहरू » दोहामा राती जीवन, पुरुष र महिलाहरूको लागि